Syria · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Syria · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Syria tamin'ny Aogositra, 2012
Ady & Fifandirana31 Aogositra 2012
Syria: Henatra Ho An'ny Fanovàna Ianao
Ady & Fifandirana29 Aogositra 2012
Misy famantarana fito ho an'ireo "henatra ho an'ny fanovàna" - na fanovàna inona izany na inona. Ao amin'ny Twitter, manome ny lisitr'ireo famantarana ireo ilay Syriana @NMSyria.
Arabia Saodita16 Aogositra 2012
Ady & Fifandirana16 Aogositra 2012
Libanona11 Aogositra 2012
Syria: “Izaho No Nitoraka Bitsika Voalohany Ny Fialàn'ny Praiministra Riad Hijab “
Ady & Fifandirana10 Aogositra 2012
Nilaza ny Syriana iray mpampiasa Twitter fa izy no namoaka voalohany ilay vaovao mikasika ny fialàn'ny Praiminisitra Syriana Riad Farid Hijab herinandro lasa izay. Mitondra ny solon'anarana hoe @THE_47th io mpampiasa Twitter io ary fantatra ihany koa amin'ny fanambarany fialàna hafa talohan'ny nanambaràn'ny media mahazatra izany.
Ady & Fifandirana09 Aogositra 2012
MENA : Mandray Ny Ramadany
Bahrain05 Aogositra 2012
Vao nanomboka indrindra ny Ramadany, volana fahasivy ao amin'ny tetiandron'ny Silamo. Io dia fotoana ifadian'ireo Silamo hanina manomboka ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany, mba hanakaikezana kokoa an'Andriamanitra ary Hankalazana ny fahasoavany. Manerana izao tontolo izao, ireo Silamo dia nanao izay hakàna ny fanahin'ilay volana anaty sary maromaro, nizara azy...